Halyeey Real Madrid ah oo weerar ku qaaday maamulka Barcelona sababa la xiriira bixitaankii Suarez – Gool FM
Halyeey Real Madrid ah oo weerar ku qaaday maamulka Barcelona sababa la xiriira bixitaankii Suarez
Dajiye September 24, 2020
(Spain) 24 Sebt 2020. Halyeeyga kooxda Real Madrid ee Hugo Sanchez ayaa weerar ku qaaday maamulka Barcelona, sababa la xiriira bixitaanka, Luis Suarez, kaas oo si rasmi ah ugu wareegay naadiga Atletico Madrid.
Barcelona ayaa si rasmi ah ugu shaacisay website-keeda bixitaanka weerar yahanka reer Uruguay ee Luis Suarez, kaasoo u wareegay kooxda Atletico Madrid.
Dhinaca kale Atletico Madrid ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah Barcelona ugala soo wareegtay Luis Suarez oo ay kusoo qaadatay heshiis xor ah oo ay la socdaan lix million euros, oo ku xirnaan doona wax qabadkiisa naadiga Atletico.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Halyeeyga kooxda Real Madrid ee Hugo Sanchez, wuxuuna yiri:
“Barcelona qalad ayey sameysay kaddib markii ay u ogolaatay Luis Suarez inuu baxo”.
“Messi wuxuu raaxo ku dareemayaa dadka fahansan isaga, bixitaanka Suarez waxay sidoo kale saameyn ku yeelan doontaa Messi”.
Si kastaba ha noqotee, Suarez ayaa ku soo biiray kooxda Barcelona xagaagii 2014, isagoo ka yimid Liverpool, wuxuuna kula guuleystay 13 koob, lixdii sano ee uu la joogay kooxda reer Catalonia.
Lixdii sano uu joogay Luis Suarez garoonka Camp Nou, wuxuu dhaliyay198 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 109 gool, 283 kulan uu ku ciyaaray maaliyada kooxda Barcelona tartamada oo dhan.
Wuxuu kula guuleystay kooxda Barcelona horyaalka La Liga afar jeer, Copa del Rey afar jeer, Spanish Super Cup oo labo jeer ah, Champions League oo hal jeer ah, UEFA Super Cup oo hal jeer ah, iyo Club World Cup hal jeer.
RASMI: Barcelona oo shaacisay in Luis Suarez uu u wareegay kooxda Atletico Madrid
Mikel Arteta oo si niyadjab leh kaga hadlay mustaqbalka Mesut Özil ee kooxda Arsenal